Adiyisɛm 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Adiyisɛm 5:1-14
Nhoma mmobɔwee a wɔde ahyɛnsode ason atetare ano (1-5)
Oguammaa no gyee nhoma mmobɔwee no (6-8)
Oguammaa no fata sɛ ɔtetew ahyɛnsode no (9-14)
5 Na mihuu nhoma mmobɔwee bi wɔ Nea ɔte ahengua no so+ no nsa nifa mu. Ná wɔakyerɛw anim ne akyi, na na wɔde ahyɛnsode ason atetare ano denneennen. 2 Na mihuu ɔbɔfo hoɔdenfo bi a ɔde nne kɛse reteɛm sɛ: “Hena na ɔfata sɛ ɔtetew ahyɛnsode a ɛtetare nhoma no ano no, na obue mu?” 3 Nanso ɔsoro oo, asaase so oo, asaase ase oo, obiara nni hɔ a na obetumi abue nhoma mmobɔwee no mu anaa obetumi ahwɛ mu. 4 Na misui paa, efisɛ wɔannya obiara a ɔfata sɛ obue nhoma mmobɔwee no mu anaa ɔhwɛ mu. 5 Ɛnna mpanyimfo no baako ka kyerɛɛ me sɛ: “Gyae su. Hwɛ! Yuda abusuakuw mu Gyata,+ Dawid+ ntini+ no, wadi nkonim,+ enti obetumi atetew nhoma mmobɔwee no ahyɛnsode ason no na wabue mu.” 6 Na mihuu oguammaa+ bi a ayɛ sɛ nea wɔakum no+ a ogyina ahengua no ne ateasefo* baanan no ne mpanyimfo no mfinimfini.+ Ná ɔwɔ mmɛn ason ne aniwa ason. Aniwa no gyina hɔ ma Onyankopɔn ahonhom ason+ a wɔasoma wɔn asaase nyinaa so no. 7 Ntɛm ara na oguammaa no baa anim, na ogyee nhoma mmobɔwee no fii Nea ɔte ahengua no so no+ nsa nifa mu. 8 Na bere a ogyee nhoma mmobɔwee no, ateasefo baanan no ne mpanyimfo 24 no+ butubutuw fam wɔ Oguammaa no anim. Ná wɔn mu biara kura sanku ne sika kɔkɔɔ nkankyee a aduhuam ayɛ no ma. (Aduhuam no gyina hɔ ma akronkronfo no mpaebɔ.)+ 9 Na wɔtoo dwom foforo+ sɛ: “Wofata sɛ wugye nhoma mmobɔwee no na wotetew n’ahyɛnsode no, efisɛ wokum wo na wode wo mogya tɔɔ nnipa+ fii abusua ne kasa* ne nkurɔfo ne ɔman biara mu maa Onyankopɔn,+ 10 na woyɛɛ wɔn ahemman+ ne asɔfo maa yɛn Nyankopɔn,+ na wɔbɛyɛ ahemfo na wɔadi asaase so.”+ 11 Afei mihuu abɔfo bebree a wɔatwa ahengua no ne ateasefo no ne mpanyimfo no ho ahyia, na metee wɔn nne nso. Ná wɔn dodow yɛ mpem dudu ahorow mpem dudu ne mpempem bebree,+ 12 na na wɔde nne kɛse reka sɛ: “Oguammaa a wokum no+ no fata sɛ ogye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne nidi ne anuonyam ne nhyira.”+ 13 Na metee sɛ abɔde biara a ɛwɔ soro ne asaase so ne asaase ase+ ne po mu, ne nea ɛwom nyinaa reka sɛ: “Nhyira ne nidi+ ne anuonyam ne ahoɔden nka Nea ɔte ahengua no so+ no ne Oguammaa no+ daa daa.”+ 14 Na ateasefo baanan no kae sɛ: “Amen!” na mpanyimfo no butubutuw fam, na wɔsomee.